BeautifulSoup Hanome Content Content ao anatin'ny dimy minitra - Semalt Expert
Soupa tsara tarehy ny kitapo python ampiasaina amin'ny famakafakana XML sy HTML. Izy no mamorona hazo parasy ho an'ny pejy Internet ary misy amin'ny Python 2 sy Python 3. Raha manana tranonkala izay tsy azo zakaina araka ny tokony ho izy ianao, dia afaka mampiasa ny rafitra BeautifulSoup hafa. Ny rakitra voarakitra dia ho feno, azo vakina ary azo ampitaina amin'ny endritsoratra lavalava sy lava be.
Toy ny BeautifulSoup, ny lxml dia azo ampidinina amin'ny html. p - kurzfristiger umzug checkliste. Ny iray amin'ireo lafiny mampiavaka indrindra an'io fiteny fandaharana io dia manome azy spam fiarovana sy vokatra tsara kokoa ho an'ny angon-drakitra ara-potoana. Ny lxml sy BeautifulSoup dia mora miana-javatra ary manome sehatra telo lehibe: ny fampiratiana, famakafakana ary ny fibebahan'ny hazo. Amin'ity lesona ity dia hampianatra anao ny fomba hampiasana ny BeautifulSoup mba haka ny lahatsoratra amin'ny tranonkala samihafa.
Ny dingana voalohany dia ny fametrahana BeautifulSoup 4 amin'ny pip. Ity fonosana ity dia miasa amin'ny Python 2 sy 3. BeautifulSoup dia voafafa amin'ny code code Python 2; ary rehefa ampiasaintsika amin'ny Python 3, dia manavao azy ho amin'ny dikan-farany farany izany, fa ny code dia tsy havaozina raha tsy mametraka ny fonosana feno Python.
Afaka mametraka parser mety ianao, toy ny html5lib, lxml ary html. parser. Raha efa nametraka pipo ianao dia mila importa avy amin'ny bs4. Raha maka ny loharano ianao dia mila manafatra ao amin'ny tranokala Python. Tsarovy fa ny mpampiasa lxml dia tonga amin'ny dikan-teny roa samihafa: parser XML sy HTML parser. Ny parser HTML dia tsy miasa tsara amin'ny dikan-teny taloha amin'ny Python; Noho izany, azonao atao ny mametraka ny parser XML raha toa ka tsy mitsahatra ny mamaly ny HTML parser na tsy tonga tsara. Ny mpampiasa lxml dia mora sy azo itokisana ary manome valiny marina.
Mampiasà BeautifulSoup hiditra amin'ny fanehoan-kevitra
miaraka amin'ny BeautifulSoup, azonao atao ny mahazo ny fanamarihana ny pejy web tianao. Ny fametrahana ny valim-panafana dia matetika voatahiry ao amin'ny fizarana Comment Object ary ampiasaina hanehoana votoatin'ny tranonkala araka ny tokony ho izy.
Titles, Links, and Headings
Azonao atao ny maka sary an-tsoratra, rohy, ary lohateny miaraka amin'ny BeautifulSoup. Tsy maintsy maka ny fanamarihana ny pejy miaraka amin'ny fehezanteny manokana ianao. Rehefa vita ny fanamarihana dia azonao atao manangona angon-drakitra avy amin'ny lohateny sy ny lohateny koa.
Mankao ny DOM
Afaka mamakivaky ny hazo DOM using BeautifulSoup. Ny fametahana tags dia hanampy antsika hanangona ny angon-drakitra ho an'ny tanjona SEO.
Raha vao vita ny dingana voalaza etsy ambony, dia ho azonao atao ny manangona lahatsoratra amin'ny pejy tsara. Ny dingana manontolo dia tsy haka mihoatra ny dimy minitra ary mampanantena vokatra tsara. Raha mikasa ny hanangona angona avy amin'ny rakitra HTML na rakitra PDF ianao, dia tsy hanampy an'i BeautifulSoup na Python ianao. Ao anatin'izany toe-javatra izany, tokony hanandrana hanaparitaka HTML ianao ary handinika mora foana ny tahirin-tranonkalanao. Tokony hanararaotra tanteraka ny sangan'asan'ny BeautifulSoup mba hanakanana ny angon-drakitra ho an'ny tanjona SEO. Na dia tianay aza ny HTML-parsers ho an'ny lxml, dia mbola afaka manararaotra ny rafitra mpanohana BeautifulSoup ary afaka mahazo valiny mahafa-po ao anatin'ny minitra vitsy.